Y-MAX College ၏မိခင် Company ဖြစ်သော Y-Max Technologies Co., Ltd ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းက စတင် တည်ထောင် ခဲ့သောကြောင့် ပညာရေး နယ်ပယ်တွင် (၁၂)နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံ ကောင်းများရှိပါသည်။ ယခုအခါ IT နှင့် Management ၂ပိုင်းစလုံးတွင် Diploma သာမက Bachelor Degree, Master, Ph.D အထိပါ အောင်မြင်စွာ သင်ကြား ပို့ချ နိုင်ခဲ့သော College တစ်ခု အဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ရပ်တည် နိုင်ခဲ့ပါပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Y-Max College (YMC) ဆိုတာ အဆင့်မြင့်ပညာရေး အတွက် ရွေးချယ်တက်ရောက်ဖို့ အကောင်းမွန်ဆုံးရပ်ဝန်းတစ်ခုဆိုတာသိစေဖို့ YMCအကြောင်း ကို မိတ်ဆက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Y-Max ၏ ပညာရေး အတွေ့အကြုံမှာ (၁၂)နှစ် ကျော်ရှိခြင်း။
YMC မှ 95% သော ကျောင်းသား/သူများသည် အလုပ်အကိုင် နေရာကောင်း များရရှိခြင်း။
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ် များဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း။
စည်းစနစ်ကျသော ကျောင်းစည်းကမ်းများနှင့် စာသင်ကြားရေးပိုင်းတွင် UK စံချိန် စံညွှန်းအတိုင်း ပြည့်မှီ၍ Facilities ကောင်းမွန်ခြင်း။
ရန်ကုန်မြို့၏ အချက်အချာကျသော နေရာတွင်တည်ရှိခြင်း။
Diploma သာမက Bachelor Degree, Master, Ph.D အထိပါ အောင်မြင်စွာ သင်ကြား ပို့ချပေးနိုင်ခြင်း။
မြန်နှုန်းမြင့် Fiber Internet လိုင်းများကို YMC ၏ Campus တစ်ခုလုံးတွင် တပ်ဆင် ထားရှိပေးခြင်း။
စိတ်ငြိမ် အေးချမ်းပြီး ခေတ်မှီ ကျယ်ဝန်းသော ကိုယ်ပိုင် ခြံဝန်းထဲတွင် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း။
Industrial Visit အဖြစ် လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်များ သို့ သွားရောက် လေ့လာခြင်း။
နယ်မှလာသော သူများအတွက် ကျောင်းနှင့် အနီးဆုံး အဆောင် စီစဉ်ပေးထားခြင်း။
ကျောင်းသူ ၊ကျောင်းသား များအတွက် နားချိန်အတွင်း ရေပူ၊ရေအေး၊ ချိုချဉ်၊ ကော်ဖီ၊ အအေး များအလုံအလောက် စီစဉ်ထားပေးခြင်း။
ကျောင်းသူ ၊ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် YMC မှ အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ် ကျင်းပလျှက်ရှိသော Seminar များ၊ ဟောပြောပွဲများတွင် အခမဲ့ပါဝင်နိုင်ခြင်း။
YMC ၏ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများကို မိမိတို့မွေးနေ့အလိုက် ကျောင်းတွင် Birthday Cake နှင့် မွေးနေ့ ကျင်းပ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
ကျောင်းစရိတ် များကိုလည်း ဘဏ်တိုး ထပ်မပေးရစေရန် စီစဉ်ထားပေးပြီး Flexible Payment Plan နဲ့ လစဉ်အရစ်ကျ ပေးသွင်းနိုင်အောင် စီစဉ်ထားပေးခြင်း။
Post graduate level အတန်းတွေ ဖြစ်တဲ့ MBA နဲ့ Ph.D အတန်းတွေမှာ Thesis နဲ့ Project Paper အစ ရှိတာတွေအတွက် YMC ၏ Academic Director ဖြစ်သူမှ အနီးကပ် ကြီးကြပ်ပေးမှာ ဖြစ်လို့ စိတ်ပူစရာ မလိုခြင်း။
အစရှိသော အချက်တွေကြောင့် YMC ဟာသင့်ရဲ့ ပညာရေးအတွက် ရွေးချယ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး College တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် နာမည်ကတော့ မောင်သက်ထင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် YMC မှာ HND Foundation တက်ရောက် နေပါတယ်။ ဒီကောလိပ်ကို ကျွန်တော် ယုံကြည်လို့ရွေးချယ် တက်ရောက် ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် နာမည်ကတော့ မောင်ထူးဝေယံဌေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် YMC မှာ HND Foundation တက်ရောက် နေပါတယ်။ ဒီကောလိပ်ကို ကျွန်တော်ရွေးချယ် တက်ရောက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းက YMC က တခြားကောလိပ်တွေနဲ့ မတူဘူး။ IT နဲ့ပတ်သက်လို့ တက်မယ်လို့ စိတ်ကူးပြီး ကျောင်းတွေ စလေ့လာတယ်၊ စုံစမ်းတယ်။ အဲ့ဒီမှာ YMC ကကျောင်းသူ ကျောင်းသားကို စတင် ဆက်ဆံပုံက အစကွာတယ်။ နွေးထွေးမှုရှိတယ်။ သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ပြီး နားလည်အောင် ရှင်းပြတယ်။
ကျွန်မနာမည်ကတော့ မနှင်းပွင့်စိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ YMC မှာ HND Foundation တက်ရောက် နေပါတယ်။ ကောလိပ် တက်ဖို့စစုံစမ်းတော့ Facebook ပေါ်ကနေရော၊ ကိုယ်တိုင်ရော ကောလိပ်တွေလိုက်ရှာ၊ လိုက်စုံစမ်းတယ်။ အများကြီးထဲကမှ နောက်ဆုံး ကျွန်မလိုချင်နေတဲ့ အချက်တွေတော်တော် များများ အဆင်ပြေတဲ့ YMC ကိုရွေးချယ် တက်ရောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ ကျော်ရွှေဝင်းပါ။ လက်ရှိ IT နှင့် ဆက်စပ်နေတဲ့ Company မှာအလုပ်လုပ် နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ??? (????????) သင်တန်းကိုတော့ Facebook ကနေတွေ့ခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေကနေ လာရောက်သင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြားမှုပုံစံကတော့အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဆရာ /ဆရာမ တွေကလည်း စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့မေးမြန်းသမျှ တွေကို ဖြေကြားပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘာတွေသင်ကြားသလဲဆိုတော့ IT ဖြင့်လုပ်ငန်းခွင့်မှာ ကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အထောက်ကူ ကောင်းများရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်နာမည်ကတော့ မောင်နိုင်လင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် YMC မှာ HND : Advanced Diploma in Computing အတန်းတက်ရောက်နေပါတယ်။ ဒီကောလိပ်ကို ကျွန်တော် ရွေးချယ်တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းက YMC မှာ Lab Room တွေ သေချာလုပ်ပေးထားတဲ့အပြင် ဝန်ဆောင်မှုကလည်း တခြားနဲ့မတူဘဲ ကျွန်တော်တို့ကို သေချာ ဂရုတစိုက် ရှင်းပြတယ်၊ လိုတာတွေ ပံ့ပိုးပေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကောလိပ်မှာ တက်ရတာ အဆင်ပြေမယ် လက်တွေ့လည်း သေချာလုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။